I-Uni EARTH Studio e-Jardim Do Mar
Jardim do Mar, Região Autónoma da Madeira, i-Portugal
Phansi ibungazwe ngu-Uni
Indawo ephansi izoba ngeyakho wedwa.
Lokhu langa, studio elikhanyayo Kushalazela amagquma obumangalisayo Madeira Isiqhingi Ngenxa futhi kokuba phansi ukuze amafasitela okusezingeni eliphezulu, okukunikeza kwangempela inkululeko nendalo. Ikhishi zinakho konke futhi ingadi ajabulisayo okukuvumela ukuthi angahlala okwengeziwe wena Uni isipiliyoni. Akudingekile ukusho, ichibi lethu le-infinity likhona futhi ukuze ujabulele futhi uphumule. Indawo yokupaka yamahhala iyatholakala e-Jardim do Mar.
I-Uni iyindawo yomqondo ethuthukisiwe ukuze ihlanganise izici ezibalulekile empilweni yomuntu. Indawo emangalisayo ye-Uni iyiguqulela ekubeni indawo yasezulwini ekumema ukuthi uzitike ngokuhlangenwe nakho okukhumbulekayo ngempela. I-Uni iqukethe izindlu ezimbili ezakhiwe ngokucophelela, eziklanyelwe ukukhulisa ngokugcwele ulwazi lwakho mayelana nokunethezeka nokujabulela konke. Indlu ngayinye inezitudiyo ezimbili, ngayinye enezici zayo ezihlukile. I-Uni EARTH iyistudiyo esingaphansi endlini engaphansi.
Izindawo ezivamile zase-Uni ziyingadi enhle, enokuthula lapho uzothola khona indawo yokuphumula futhi ujabulele ilanga kanye nendawo yokupholisa lapho izinga lokushisa likudinga. Sinezethu izitshalo zemifino namakhambi anephunga elimnandi kanye nengadi yemifino lapho wamukelekile khona kakhulu ukukhetha imifino yakho ukuze wenze ukudla okumnandi kwakho nabangani noma umndeni wakho.
Empeleni, i-Uni kufanele ibonwe njengendlela yokufinyelela isiphetho: ukuphumula okuphelele. Amandla azungezile akuvumela ukuba uvumele ingqondo yakho izulazule ezinkathazweni zansuku zonke futhi akwamukela ukuthi umane ujabulele lesi sikhathi ngokwazisa indawo engokwemvelo emangalisayo esinenhlanhla yokuba nayo lapha. I-Uni iyisiqhingi se-boutique lapho ufika wenza ngokushesha, njengoba senza, ukuthi lokhu akuyona ngaphansi kwezwe lamaphupho.
ICEBISO: Khumbula ukupakisha ukukhanya, awudingi okuningi. Ukuhamba ukuya kuma-studios ukusuka endaweni yokupaka izimoto kwenziwa ngendlela encane futhi encane (10 min ukuhamba) futhi ngaleyo ndlela sikweluleka ukuthi uthathe kuphela lokho okudingayo ngempela futhi ushiye zonke izimpahla ezisele emotweni.
UUni Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 58044/AL
Hlola ezinye izinketho ezise- Jardim do Mar namaphethelo